Ikhaya/Iiphotography/UTM uhlela ku Google Earth
IiphotographyUkulandaGoogle umhlaba / imephuTopography
Isixhobo "sokongeza indawo" sisetyenziswa. Oku kubonisa indawo yolawulo apho ulungelelwaniso luboniswa kwifomathi ye-UTM. Ukuba indawo ebekiweyo iyarhuqwa, itshintsha ngokuzenzekelayo ulungelelwaniso. Ukuba siyayazi ulungelelwaniso, ngoko siyilungisa kuphela kwifom, ebonisa indawo kunye nokulungelelanisa; Xa ukhetha iqhosha lokwamkela, inqaku liya kubekwa kwindawo esiyibonisileyo.
3. Ukhetho lokufaka izilungelelaniso ezininzi ze-UTM kwiGoogle Earth ngqo kwi-Excel
Xa ucofa iqhosha elithi "Yenza i-KML", ifayile iya kugcinwa kwindlela oyichazileyo. Lo mzobo ulandelayo ubonisa indlela uluhlu lwabalungelelanisi oluboniswa ngayo. Ifayile kufuneka iboniswe ngolu hlobo.
Ukufumana itemplate ngaphandle kwemingcele, unokufumana nayo
I-PayPal okanye iKhadi leTyala kule link
KuGoogleEarth pro iifoto zinokusombulula kangcono?
1. Gcina ukhumbule ukuba isiphequluli se-garmin sinokuchaneka phakathi kwe-3 kunye ne-5 yamitha nganye kwindawo oyithathayo.
2. Imifanekiso ye-google yomhlaba ayiqinisekisiwe ngokwemiqathango ye-psositioning. Ngoko bahlala befuduka kwimizi ngezinye ii-30 metres.
3. Ukuba uza kwenzeka kwi-Arcgis, uyangenisa kuphela kwinkqubo. Idatha yakho yegps ichanekile ngakumbi kunokuba ungayifumana ngokuyihambisa ngomfanekiso wesimo somhlaba. Ukuba ufuna ukubona ukuba zihambelana nomfanekiso, kufuneka ube nomnye umthombo, kungekhona i-google emhlabeni.
kuvela intsomi ebonisa ukuba "ASIYIQONDI LENDAWO", kunye nedigri zolungelelaniso, idesimali ayinangxaki. Enkosi ngoncedo lwakho.
Kuthetha ukuba, kwinqanaba elincinane, lihle kakhulu. Njengoko uyenzile nge RTK, ndiyaqonda ukuba ubeke isikhundla esisekelwe kumfanekiso. Kwinqanaba elithile, kuya kuba kuhle kuwe.
Bhotani enkosi kakhulu ngenxa izimvo zakho ingxaki kukuba xa ndenza ukulungiswa kunye isiseko emiselwe ndiyayiguqula zilungelelanise emva kokuba ulungiso kubonakala kakuhle kunye nomfanekiso ngaphandle koko uthathe iingongoma ezimbalwa rtk akukho indawo yolawulo kwaye uququzelelo benza kakuhle kakhulu ngokumalunga nomfanekiso iposiso ndiyibona kuphela kwiindawo ezibukhali
Sawubona Fredy Ngokuqinisekileyo zakho iingongoma zilungile; Ngokubanzi, imifanekiso yeGoogle Earth ihambela phakathi kwe-15 kunye ne-30 yamitha. Ungaqwalasela ukuba kwiindawo zokudibana phakathi kweentlobo zeempuphu ezahlukeneyo.
ebusuku Good ngubani na hlanganyela ndiyabulela mna, kufuneka iingongoma ezimbini onalo kwi Garmin GPS zezi: 975815 1241977 kunye nezinye ingongoma yi 975044 kunye 1241754, njengoko ndithi enter ngokuzithandela kwabo cordenadas izimvo Google Earth e Google Earth. Le ndawo Panama de Arauca Colombia 19 N zone emhlabeni Google mna usebenzisa ngeprojektha ezinqamlezayo Mercato 2000 SIRGAS oyi kunye parameters CENTRAL okuyi: ekwizibanzi -71.0775079167 4.5962004167, lo 1000000 1000000 ngasentla
I agardezco nabo Singakufanekisa kum njengoko kumela nabo google emhlabeni okanye okanye achaze indlela uze unike uququzelelo ye google ngam. Ndiya kuvuya
Ulungelelaniso olukhankanyiweyo alukhethi kwihlabathi. 60 ke repinten amaxesha kumntla ikhweyitha kunye namaxesha 60 kwi-ikhweyitha emazantsi, amaxesha 2 ummandla UTM nganye.
Iimifanekiso zeGoogle Earth zishiyekile, ngoko ke ukuba ngaba ulungelelaniso olufanayo uya kufumana ukufuduka. Nangona umgama othetha ngawo ngokuqinisekileyo, kufuneka usebenzise enye iDatum.
Molweni maqabane! Ndingathanda ukwenza umbuzo onokuthi ubonakale usisidenge kuwe. Kwi-autocad I georeference umfanekiso (jgp) kunye neplagin endiyisebenzisayo ebizwa ngokuba yi "GeoRefImg", kakuhle, xa umfanekiso ubekwe kakuhle kwisithuba se-autocad ndithatha indawo engacwangciswanga kwaye ndilungele ulungelelwaniso (x, y) kwaye ke mna' m ukuya ku-google umhlaba kwaye ungenise ezi zilungelelaniso kwimodi ye-UTM kodwa ayibeki iphuzu kwindawo echanekileyo kunye nokwahlukana phakathi kwe-150 kunye ne-200m. Yiyiphi enokuba ifuneka? i-datum esetyenziswa yi-autocad ayifani ne-google Earth? Okanye ngaba yibug yomhlaba kaGoogle?
Ene eli nqaku lichaza indlela elinokuveliswa ngayo nge-GIS ebonakalayo, kodwa endaweni yokudala igridi ngokusekelwe kwiidridi, ukwenza ngokusekelwe kumgama kwimitha. Emva koko i-georeferential and export to kml
Emva koko, umele ukhumbule ukuba imifanekiso yeGoogle inokufuduka, ayihambisani nayo kwaye unokujonga kwiindawo ezikhoyo phakathi kwazo. Enye indlela yokubonisa ukuba ukudweba isakhiwo, uze usebenze umgca wonyaka omnye ngembali iGoogle kwaye uya kubona ukuba ayifani.
Molo "g", ulwazi lunomdla kakhulu, nangona kunjalo ndizifumana ndinemeko yokuba ndinxibelelana ne-UTM "X" "Y" kwaye andikwazi okanye andiyazi indlela yokufumana imephu emhlabeni, ndingavuya ukuba ungandinceda
Ndifuna ukuhambisa iipolgoni zeeplani ukuya kwintliziyo ye-Google nceda ndixelele
Hayi Ana, kukho iinkqubo zezifunayo, ezidla ngokuba yi-geocoding. Kodwa ngokuqhelekileyo kuxhomekeka kwisakhiwo seedesi.
Kuqhelekile ukuba ihluke. Imodeli yedijithali yeGoogle Earth ilula kakhulu, kwaye xa uyiguqulela kwi-AutoCAD phakathi kwe-triangulation kunye nokutshulwa kukho amaphuzu anziwe ngamazinga aphezulu.
Ukuba oko kungenxa yomsebenzi oqhelekileyo, i-GPS yakho ayiyi kuba luncedo kuba ulungelelwaniso lwe-radial kwinqanaba ngalinye liphuma kwi-3 ukuya kwi-6 yamitha. I-polygon yakho iya kuba ngaphezulu okanye ngaphantsi endaweni, kwaye ngokujikeleza, kodwa ubuncinane uyayibona kufuphi nalapho iboniswa kwiGoogle Earth.
Imifanekiso ye-Google Earth ayiluncedo kwi-georeferencing kuba ihlala ihamba. Ngoko ukulinganisa kwe-GPS yakho kukuthembeke ngakumbi.
Uxolo, ndichaza ngcono, (kule nto ndenziwe ngamaplanga, incinci endiyaziyo yi-trial and error) ndinemephu kwaye ndifuna ukuyibeka nge-google earth. idatha ebhaliweyo kwisicwangciso inezikhombisi ezifana nezi, ireferensi ibhaliwe kumgca ngamnye (andinazo izicwangciso kunye nam ngoku) othi umzekelo: SW 55 ° 43'24 "nge-1.245m, kunye njalo kumgca ngamnye. Ingxaki yam kukuba ndinombono ongacacanga wokuba iphi, kodwa hayi kanye apho amanqaku epolygon akhoyo. Ndifuna ukuyifumana kugoogle, kuba ndiyayazi indawo (kukho malunga neehektare ezingama-2500). kodwa andinandawo yokuqalisa, nditsho nakwisihloko.
Ndingathanda ukwazi ukuba ndingawufumana na upholigoni onedatha kuphela yemigama yeebheringi, umzekelo ethwele NW 35° 25′ 33″ CO 1200 m….njalo njalo nezinye iinkcukacha. Ingxaki endiyifumanayo kukuba andinandawo yokuqalisa kwaye ndiyakholelwa ngokubanzi ukuba zii-UTM okanye i-° ' kunye ” kodwa umzekelo: N 65° 34' 27″.
Ndifuna ukubona imifanekiso ngokwahlukeneyo quenos I ikhefu ukubona ngokwahlukileyo photos 3 Tre s ehlabathini jikelele kunye zilungelelanise yayo akakwazi ukubona umfanekiso ihlwempu njenge eyahlukileyo picture wabulela ndinceda ndabona ukuba mna umfundi SENCICO ucando Arequipa Peru
Ulungile! Ndingumfundi we-PFG Ukulawulwa Kwemvelo yeYovaryvarian University yaseVenezuela. I-google earht yinkqubo enhle yokufumana nayiphi na indawo, kodwa kufuneka ihlaziywe, ngenxa yenguqu kunye nokuguqulwa okwenzekayo kwiplanethi. Imifanekiso ebonakalayo iluncedo kodwa ayihambanga neendaba. Oku kwenzeka ngeemilambo ezenza utshintsho olunzulu. Kuphela nje isiphakamiso Siyabonga ..!
1 Kufuneka ube ne-coordinates, eqinisweni, enoba ngumzekelo X = 667431.34 Y = 1774223.09
2 Ubangena kwifayile efudumeleyo, kwiikholamu ezihlukeneyo (kunokubakho ezininzi)
5. kwiqhosha ekunene kwe "data" ukhetha iiseli ze-excel sheet apho unezilungelelanisi.
8 Xa ucinezela i-Acept pointer, ifayile iya kudalwa.
ukubona ukuba ufuna ukukunceda. Idatha enayo yohambo apho unayo? Unayo imilinganiselo? Ingabe kwiskrini seGoogle Earth okanye ufumene ngenye indlela?
Iimephu zeDynamic ezineZinto eziBonakalayo eziSisiseko 9